ထူးဆန်းလှတဲ့ အိမ်မက်နှစ်ခုကို မက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ တေးသံရှင် တင်ဇာမော်…. – စှယျစုံသုတ
ထူးဆန်းလှတဲ့ အိမ်မက်နှစ်ခုကို မက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ တေးသံရှင် တင်ဇာမော်….
ပရိသတျကွီးရေ ပွီးခဲ့တဲ့လက ဆုံးပါးသှားခဲ့တဲ့ တငျဇာမျော ရဲ့ မိခငျဖွဈသူဟာ မဆုံးပါးခငျမှာ သမီးလေးရဲ့ အနီးကပျ ပွုစုစောငျ့ရှောကျမှုကို အပွညျ့အဝရခဲ့ပွီး ဝဒေနာရဲ့ နှိပျစကျမှုတှကွေားကနပေဲ ခဈြသမီးလေး ရဲ့ ယုယကွငျနာမှုတှကွေောငျ့ အငွငျသာဆုံး အနအေထားနဲ့ ဘဝကူးပွောငျးသှားခဲ့တာပါ။
အားကိုးရတဲ့ ခဈြသမီးလေးကို သားဆယျယောကျ နဲ့ တောငျ မလဲနိုငျဘူးလို့ အမွဲတမျး ခြီးကြူးခဲ့တဲ့ မိခငျ ရဲ့ စကားကွောငျ့ သူမရဲ့ဘဝမှာ လူဖွဈရကြိုးနပျပွီလို့ ခံယူထားကွောငျး တငျဇာမျောက ရငျဖှငျ့လာခဲ့ ပါတယျ။
ဒီနမှေ့ာလညျး မိခငျ မဆုံးပါးခငျမှာ သူမ မကျခဲ့တဲ့ အိပျမကျအကွောငျးကို ဖှငျ့ပွောလာခဲ့ပါတယျ။ မိခငျဆုံးမယျ့ရကျ ရဲ့ မနကျအစောပိုငျးမှာ လှနျခဲ့တဲ့ (၁၁) နှဈနဲ့ (၈) လ အကွာက ဆုံးပါးသှားခဲ့တဲ့ ဖခငျဖွဈသူကို အိပျမကျတှမေကျခဲ့ပွီး အိပျမကျမကျတိုငျး စကားမပွောတဲ့ ဖခငျဟာ သူမကိုထူးထူးဆနျးဆနျး စကားတှအေမြားကွီးပွောခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။
မိခငျကှယျလှနျပွီး (၁၂) ရကျအကွာမှာတော့ ဆုံးပါးသှားတဲ့မိခငျ ရဲ့ အကွိုကျဆုံးအစားအစာဖွဈတဲ့ ပဲပွုတျထမငျးနယျကို ခှံ့ကြှေးနတေဲ့ပုံစံ အိပျမကျမကျကွောငျး သူမ ရဲ့ လူမှုကှနျယကျမှာ ရေးသားထားခဲ့ပါတယျ။
မိခငျမဆုံးခငျမှာလညျး နားနား ကပျပွီး မွေးတှရှေိ တဲ့အင်ျဂလနျကို တနျးတနျးမတျမတျ သှားဖို့ မှာခဲ့တဲ့အကွောငျး ပွောပွခဲ့ပါသေးတယျ။ လူ့အခှငျ့အရေးအပွညျ့အဝရတဲ့နိုငျငံတှမှော လူဖွဈရတာ သိပျကိုကံကောငျးပါတယျ။ကောငျးမှုကုသိုလျတှပေဲလုပျခဲ့တဲ့ မိခငျကွီးအတှကျ ထပျလောငျးကုသိုလျလေးတှကေို အင်ျဂလနျမှာရော မွနျမာပွညျမှာပါ အတူတူလုပျပေးခဲ့ပွီး မိခငျကွီး တဈယောကျ ကောငျးမှနျမွငျ့မွတျတဲ့ဘုံဘဝရောကျအောငျ အထောကျအပံ့ကောငျးတှေ လုပျပေးနကွေဆဲပါပဲ။
ပရိသတ်ကြီးရေ ပြီးခဲ့တဲ့လက ဆုံးပါးသွားခဲ့တဲ့ တင်ဇာမော် ရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူဟာ မဆုံးပါးခင်မှာ သမီးလေးရဲ့ အနီးကပ် ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုကို အပြည့်အဝရခဲ့ပြီး ဝေဒနာရဲ့ နှိပ်စက်မှုတွေကြားကနေပဲ ချစ်သမီးလေး ရဲ့ ယုယကြင်နာမှုတွေကြောင့် အငြင်သာဆုံး အနေအထားနဲ့ ဘဝကူးပြောင်းသွားခဲ့တာပါ။
အားကိုးရတဲ့ ချစ်သမီးလေးကို သားဆယ်ယောက် နဲ့ တောင် မလဲနိုင်ဘူးလို့ အမြဲတမ်း ချီးကျူးခဲ့တဲ့ မိခင် ရဲ့ စကားကြောင့် သူမရဲ့ဘဝမှာ လူဖြစ်ရကျိုးနပ်ပြီလို့ ခံယူထားကြောင်း တင်ဇာမော်က ရင်ဖွင့်လာခဲ့ ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာလည်း မိခင် မဆုံးပါးခင်မှာ သူမ မက်ခဲ့တဲ့ အိပ်မက်အကြောင်းကို ဖွင့်ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ မိခင်ဆုံးမယ့်ရက် ရဲ့ မနက်အစောပိုင်းမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၁) နှစ်နဲ့ (၈) လ အကြာက ဆုံးပါးသွားခဲ့တဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူကို အိပ်မက်တွေမက်ခဲ့ပြီး အိပ်မက်မက်တိုင်း စကားမပြောတဲ့ ဖခင်ဟာ သူမကိုထူးထူးဆန်းဆန်း စကားတွေအများကြီးပြောခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မိခင်ကွယ်လွန်ပြီး (၁၂) ရက်အကြာမှာတော့ ဆုံးပါးသွားတဲ့မိခင် ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးအစားအစာဖြစ်တဲ့ ပဲပြုတ်ထမင်းနယ်ကို ခွံ့ကျွေးနေတဲ့ပုံစံ အိပ်မက်မက်ကြောင်း သူမ ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်မှာ ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။
မိခင်မဆုံးခင်မှာလည်း နားနား ကပ်ပြီး မြေးတွေရှိ တဲ့အင်္ဂလန်ကို တန်းတန်းမတ်မတ် သွားဖို့ မှာခဲ့တဲ့အကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ လူဖြစ်ရတာ သိပ်ကိုကံကောင်းပါတယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပဲလုပ်ခဲ့တဲ့ မိခင်ကြီးအတွက် ထပ်လောင်းကုသိုလ်လေးတွေကို အင်္ဂလန်မှာရော မြန်မာပြည်မှာပါ အတူတူလုပ်ပေးခဲ့ပြီး မိခင်ကြီး တစ်ယောက် ကောင်းမွန်မြင့်မြတ်တဲ့ဘုံဘဝရောက်အောင် အထောက်အပံ့ကောင်းတွေ လုပ်ပေးနေကြဆဲပါပဲ။
မသဆေုံးခငျမှာ ပါးစပျကပွောပွီး ရေးစပျခဲ့တဲ့ ကဗြာဆရာအောငျခြိမျ့ရဲ့ နောကျဆုံးကဗြာလေး